Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo shaacisay inuu soo dhamaaday Wejigii koowaad ee howlaha la dagaalanka Shirkiyaadka. | Halganka Online
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo shaacisay inuu soo dhamaaday Wejigii koowaad ee howlaha la dagaalanka Shirkiyaadka.
Madaxa howlaha la dagaalanka Shirkiyaadka Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Sacad Karataay ayaa maanta shaaciyay inuu soo dhamaaday wejigii hore ee howlaha la dagaalanka Shirkiyaadka,kaasi oo mudooyinkii udambeeyey si xowli ah uga socday gobolada koonufureed ee dalka soomaaliya.
Howlgalkaasi oo ahaa mid lagu bur burinayo qubuuraha ay caabudaan dadka suufiyada ah ayaa waxay maanta waxay Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab warbaahinta ugu soo bandhigeen Xerta Aadan dheere ee degmada wardhiiglay qaar kamid ah waxyaabihii ay kasoo saareen qubuurahaas.
Waxyaabaha sida aadka ah uga yaabiyay dadkii goob jooga ka ahaa goobta waxyaabahaasi lagu soo bandhigay ayaa waxaa kamid ahaa dhagax usamaysan qaabka dakarka oo sida la sheegay Horgoogayaasha Xeradaasi ay dadka Caamada ah ugu sheekayn jireen inuu waxtar u yahay Haweenka wax dhali waaya.
Sidoo kale waxyaabihii halkaasi lagu soo bandhigay waxaa kamid ah ulaha loo yaqaano Saalimowga,tusbaxyo aad u waaweyn iyo alaabo kale oo lagu harowsan jiray dadka Caamada ah ee Alle sokadiisa usoo cibaadaysi tagi jiray qubuurihii ay bur buriyeen Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
Xarakada Mujaahinta Alshabaab ayaa mudooyinkii udambeeyey waxay wadeen howl galo balaaran oo lagula dagaalamayo Shirkiyaadka ay sameeyaan dadka Caamada ah ee aaminsan dariiqada Suufiyada,iyadoona howlgaladaasi intii ay socdeen lagu bur buriyo qubuuro ay ku aasnaayeen wadaado ay Suufiyadu si aad ah uqadarin jireen.
Qubuuraha ay bur buriyeen Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa waxaa kamid ah qubuuro ay ku aasanaayeen Muxyadiin Axmed Celi,Aadan Dheere,Cali Muu’min iyo Maxamed biyo maalow oo dhamaantood ahaa rag Alle Sokadiisa wax la waydiisto.
« Maamulka Xisbul Islaam degmada B/weyne oo ku Hanjabay in ay Gowrac marsiin Doonaan Xildhibaan Gaagaale iyo Maleeshiyaadka kale ee Feer Feer iskasoo abaabulaya. Qormada Xigta »